Meksika: Niteraka Adihevitra Ny Hetsiky Ny Tanora #YoSoy132 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2012 7:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Dansk, Español
Mitondra any amin'ny tranonkala teny Espanola ny rohy rehetra raha tsy nomarihana manokana.
Araka ny notaterinay [en] teo aloha, dia nipongatra ny hetsika iray fantatra amin'ny hoe #YoSoy132 any Meksika tamin'ny 11 May 2012, naka toerana tao anatin'ny dingana ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena hoavy misy amin'izao fotoana. Hetsiky ny tanora izy ity, mety hoe hetsiky ny mpianatra, tsy miandany aminà politika raha ny tatitra navoakany ho an'ny haino aman-jery, vao haingana fa matanjaka, ary nahomby tamin'ny fitarihana olona anarivony ho amin'ny hetsika famoriam-bahoaka sy ny diabe ataony.
Efa naminavina ny iray amin'ireo fanambin'ity hetsika ity sahady i Attorney Miguel Carbonell (@MigelCarbonell) tao anaty bitsika iray nalefa ny 24 May 2012 :
Manana fanamby goavana manoloana azy ireo ilay hetsiky ny tanora amin'ny fanovàna ny hetsi-panoherana fahiny hanjary ho tolo-kevitra.
Namoaka ity lahatsoratra ity ny mpitoraka bilaogy Sendero de Fecal izay ahitana ny tanjona sasantsasan'ilay hetsika :
Ny dikan'ity hetsika ity dia ho fanakanana ny tery vay mantan’ ny fahefan'olom-bitsy eto amin'ny firenena sy ireo mitàna ny fahefana anatin'ireo sampana telon'ny governenmanta ankehitriny amin'ny fametrahana izay ho olona atolotra hofidiana ho filoham-pirenena, natao ihany koa izy ity mba hanetsehana antsika mialoha mba hahafahana mamaly sahady ny mety ho halatra amin'ny fifidianana.
Tsy tokony ho hetsika natao ho an'ny fotoam-pifidianana ihany izy ity, fa tokony ho hetsika izay mitady ny fanovana eo amin'ny firenena ihany koa, mantanteraka ireo fangatahana ny rariny avy amin'ny vahoaka ary mihetsika mba hamaha ireo olana goavana izay mamely mafy ny firenena amin'ny sehatra mahakasika ny fiarahamonina Meksikana.
Fanampin'izany, nofaritan'ny bilaogy Kaniwa ity hetsiky ny tanora ity ho toy ny:
Netsehina manodidina ny fitakiana tena hafa mihitsy – raha ny marina, efa hatry ny elabe, fitakiana tsy azo ialàna (aparitaho ny haino aman-jery, amporisiho ny tena fifaninanana marina eo amin'ny fifandraisan-davitra, lavo ny fametrahana an-katerena ny iray amin'ireo mpirotsaka ataon'ireo fahitalavitra roa matanjaka, ny Televisa sy ny TV Azteca any Meksika, iantohy ny zo idiran'ny olon-drehetra amin'ny aterineto, fanesorana ny fizarazarana niomerika izay mahatonga ny antsasa-manila maherin'ny vahoaka tsy hahita irika amin'ireo haino aman-jery ireo), analiny maro ny mpianatry ny anjerimanontolo manerana ny firenena, notarihan'ny “kiana faobe” no nananganana azy ity, ireo mpianatra avy amin'ny Anjerimanontolo Ibero-Amerikana no nametraka fanamby tamin'ny firenena ny mba hifohazany, ny hitsipahany ny fifehezana sy fanodinkodinana atao an'ireo haino aman-jery goavana, amin'ny fampiasana ireo fitaovana amin'ny vaninandrony: Facebook, Twitter ary YouTube.
Fivoriambe voalohany nataon'ny #YoSoy132. Sary: J. Tadeo
Maro no mahita fa tsy azo ialana ny fiaikena ireo singa sasantsasany tamin'ny lahatenin'ny iray amin'ireo kandida nilatsaka ho Filoham-pirenena ato amin'ireto famaritana ny hetsika ireto; nitarika adihevitra teo amin'ireo mpampiasa Twitter ny tranga iray ahitana fa misy mpikambana ao amin'ny #YoSoy132 manondro kandida iray manokana na koa manohana ny hafa.
Carlos García (@imaurum), izay manasongadina ny #YoSoy132 ny sary famantarana azy, dia nanamarika ny fandavana amin'ny ankapobeny izay araka ny fijeriny azy dia natao ho an'ny iray amin'ireo kandida, no tsy namela handalo fotsiny ilay fotoana fanararaotra mba hanaratsiana azy taminà famaritana iray :
Eo amin'ny tambajotra sosialy, eny an-dalana, eny amin'ny anjerimanontolo, eny amin'ny fivarotan-dehibe, eny rehetra eny dia voaheloka daholo ny PRI sy ny Peña Nieto saribakoliny .
Noho ny fahitàna ny fihizingizinan'ny teny sahala amin'ireny, dia nametraka fanotaniana ny mpampiasa Twitter toy ilay mpisolovava Gerardo Laveaga (@GLaveaga) raha toa ka manohana na mitsipaka kandida tokoa ny #YoSoy132 :
Mba hahatakarana azy tsara; hetsika manohana ny ‪#AMLO sa mitsipaka ny @EPN ny ‪#YoSoy132 ?
Mitoraka bilaogy momba ity lahateny “tsy fiandaniana ara-politika” ity i Kazbam ary koa ireo lohahevitra hafa izay nahatonga azy hihataka amin'ilay hetsika:
Amin'izao fotoana izao, milaza ny mpanaraka ny 132 fa tsy mianday ara-politika izy ireo. Nefa milaza ihany koa izy fa manohitra ny PRI sy ny Peña Nieto. Tiko izy ireo mba manazava amiko hoe ahoana no handavany ny kandida iray sy ny antoko politika iray nefa izy ireo tsy manohana ny hafa. Ny tsy miandany ara-politika dia tsy hoe tsy fanohanana antoko iray, tsy ny hanohitra an'iza loatra.
Hoy izy namarana nanao hoe:
Ah, ary tiako hazavaina fotsiny, mba tsy hisy fifangaroana, ny antony iheverako ny tenako hoe ivelan'ny 132 akory tsy midika fa manohana ny kandidà PRI aho. Tsy handeha hifidy an'i “Mr. Quaffed” aho, aza diso hevitra.
Tonga amin'ny teboka iray hilazany ny ompa voarainy avy aminà mpanohana mafana fo ny antoko politika iray i Abel Alejandro Heras (@aheras) noho izy naneho ny heviny mikasika ilay hetsika:
Raha nanome ny hevitro mikasika ny ‪#MarchaYoSoy132 aho, ny kely indrindra azoko dia ny ompa, namofompofona Perredista [avy amin'ny Antokon'ny Revolisiona Demokratika [en]]. Tsia, misaotra, tsy izy intsony aho.
Amin'izay lalan-jotra izay ihany, naka ohatra tamin'ireo ompa ny mpitoraka bilaogy avy amin'ny Cachitos de mi Vida ary nanontany:
Firenena mandefitra kokoa sy demokratika ve no tiantsika? Raha izany, maninona no ambaniana ireo izay andeha hifidy an'i X, Y na Z? Zavatra iray hafa ny hoe manakiana ny zotra ara-politika sy ny seha-pifaneraseran'ny kandida iray, ary zavatra iray hafa ny hoe manompa ireo izay nifidy fironana ara-politika iray manokana.
Niantso fitokonana ny #YoSoy132 amin'ny 2 Jolay. Sary: J. Tadeo
Jaime Benítez (sahala amin'ny maro) ihany koa (@El_Mesie) dia nanamarika ny hetsika niaraka tamin'ny tenifototra #YoNoSoy132, sady niampanga ny National Regeneration Movement (“MORENA”) izay manindrahindra ireo kandida ho filoham-pirenena, ho “naka ankeriny ” an'ilay hetsika :
Tsy misy dikany ny tenifototra ‪#MarchaYoSoy132 satria izy amin'izao lasa manohana ny ‪#MORENA ary niala ny tsy fiandaniana ara-politika, nojirihan'ireo olona taloha toa an'i @epigmenioIbarra ny #YoNoSoy132 ‪#mexico
Raha ho azy indray, nanoratra mikasika ilay “fijirihana” ny hetsika nataonà vondrona manana fironana sosialista i Gerardo Arellano (@ARELFC), ary dia nizara ity sary ity hanaporofoana izany:
Tena ratsy. Nojirihan'ireo olona izay mihevitra ny tenany ho sosialista ny ‪#MarchaYoSoy132. pic.twitter.com/WPXbO6Pv
Maneho firehan-kevitra hafa, nametra-panontaniana i Rafael Medina (@rafilla_rm) inona no antony tsy hangatahan'ny hetsiky ny “mpianatra” ny tokony hiverenan'ny mpampianatra (izay nanao hetsi-panoherana manerana ny firenena nitsipaka ny hanaovana fitsaran'asa) indray any am-pianarana:
@CarlosLoret Maninona ireo mpikambana ao amin'ny ‪#yoSoy132 no tsy mangataka ny hiverenan'ireo mpampianany any an-dakilasy ka manaiky ho tsaraina amin'ny asany?
Raha jerena ireo hetsika rehetra nandritra izy andro vitsy lasa izay niparitaka tamin'ny Twitter sy tambajotra hafa, dia nampahatsiahy i Osvaldo Suarez (@paul_suco) hoe :
Mila tonga saina isika fa ny safidy tena tsara tsy ho avy amin'ny tambanjotra sosialy akory no hatsangana.
31 andro sisa tavela dia tsy maintsy hifidy ny filoham-pireneny manaraka indray ireo vahoaka ao Meksika. Tena nametraka ny lanjany vetivety sy tamin'ny fotoana nilàna azy teo amin'ireo hevi-bahoaka ny hetsika #YoSoy132; na izany aza niteraka fifanakalozana teo amin'ireo manana fomba fihevitra tsy mitovy ny nataony, ny tanjony, ary ny fanehoan-keviny. Manantena izahay fa mazava tsara fa ny vato (anaty vata fandatsaham-bato) no andresena ny fifidianana fa tsy ny bitsika (tweets).